अमेरिकी खोप आजबाट लगाउन सुरू, काठमाडौंको कुन–कुन स्थानमा लगाउन पाइन्छ? – Health Post Nepal
अमेरिकी खोप आजबाट लगाउन सुरू, काठमाडौंको कुन–कुन स्थानमा लगाउन पाइन्छ?
२०७८ साउन ४ गते ६:२४
आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अमेरिकाबाट प्राप्त भएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप देशका विभिन्न स्थानबाट लगाइने छ।
५० बर्ष देखि ५४ उमेर समूहलाई समूहलाई लगाइने छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयको अनुसार सो खोप पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता (वर्ग क र ख) भएका नागरिकहरु, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरु र यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, र सरसफाईकर्मीहरुलाई समेत दिइने छ।
जोन्सनको १५ लाख ३४ हजार ४५० डोज कोभ्याक्स सुविधामार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो। यो खोप एक डोज मात्रै लगाए पुग्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ‘जानसेन’ खोप १७७ भन्दा बढी केन्द्रबाट लगाइने छ। अमेरिकी खोप साउन ४ देखि ६ गतेसम्म अभियान चल्ने छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले काठमाडौंका खोप केन्द्र स्थलगत अनुगन गर्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले १० बजेदेखि अपांग अस्पताल जोरपाटी, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल महाबौद्ध र पाटन अस्पताललगायतको निरीक्षण गर्नेछन्।
काठमाडौंमा जिल्लामा ५० भन्दा बढी खोप केन्द्र छन्। जसअनुसार वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, शङ्करमपुर अस्पताल, हिमाल अस्पताल, ओम अस्पताल एवं रिसर्ज सेन्टर, क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र जनमैत्री अस्पताल लगायतका खोप केन्द्र छन्।